Monday January 19, 2015 - 15:50:56 in Wararka by Super Admin
Boqolaal qof oo lagasoo aruuriyay dhulka Soomaaligalbeed Itoobiya gumeysato,magaalada Muqdisho iyo deegaanno Mudug katirsan ayaa lagu kulmiyay Dhuusamareeb waxaana la sheegay in ay madax ka noqon doonaan maamulka Cusub ee Itoobiya qaban qaabadiisa ka waddo Galguduud.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in khilaaf xooggan uu ka aloosanyahay cidda madaxweyne ku sheegga ka noqonaysa maamulka cusub,kooxaha mushrikiinta wakiillada Itoobiya ayay saraakiisha ciidanka Xabashida Itoobiya ku qanciyeen ka qeyb qaadashada dhismaha maamulka.
Xuseen Wehliye Cirfo oo ku magacaaban guddoomiyaha Galguduud ee DF-ka ayaa sheegay in shirkan uu noqon doono mid lagu doorto madaxweyne iyo ku xigeenadiisa kadibna ay bilaabi doonaan shaqadii loo xilsaaray.
Kuwa qurba joog ah ayaa iyana Dhuusamareeb ku sugan halkaasi oo ay ka raajicinayaan xilal magac uyeel ah,arrinta layaabka leh ayaa ah in Itoobiyaanku ay kala xulayaan ergada shirka qeyb gelaysa islamarkaana ay qabaa’illada Galguduud iyo Mudug dega ku tashkiilinayso in ay xubno usoo dirsadaan shirka.
Qorshaha gumeysiga ku dhisan ee Itoobiyaanku ka leeyahay shirka Dhuusamareeb waxaa kamid ah:-
1-in hal maamul oo Jigjiga hoos taga ka dhisto Galguduud,Mudug iyo Hiiraan.
2-in Maleeshiyaad calooshood u shaqeystayaal ah oo u dhigma Liyuu Booliska ay ka aruuriso gobollada dhexe kadibna tababar ay ugu qaado gudaha dhulka Somaligalbeed.
3-in Cabdi Qeybdiid iyo siyaasiyiin qurba joog ah ay noqdaan madaxda maamulka sidaasina ay ku fulaan damacyada Itoobiya ee qabsashada gobollada dhexe ee Soomaaliya.
Caqabadaha ku horgudban Rabitaanka gumeysi ee Itoobiya.
1-Awoodda melleteri iyo midda siyaasadeed ee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
2-loolanka qabaa’illada mandiqadda gobollada dhexe.
3-xasaasiyadda Itoobiyaan naceybka ku dhisan ee Soomaalida gobollada dhexe qabaan.
Waxaa xusid mudan in maamulka Puntland isku magacaabay ee qudhiisa Itoobiya dusha sare ka maamusho qaab beeleed ayuu ugasoo horjeedaan maamulkan halka Cabdi Qeybdiid iyo maamulkiisa Galmudug ay geed fadhi u yihiin dhismaha maamulka gobollada dhexe.